[Injongo yokuqala yedayari yabahambi]
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu夕姐
U夕姐 ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yethu inamagumbi amabini okulala, amagumbi okuhlambela amabini neebhedi ezintathu, nto leyo ekulula ukuhlala kuyo abantu abaninzi.
Indlu ino "walker" - umhambi
IAershan incinci kakhulu, uyafuna ukuza uzokubona? Ukuhamba ujonge izinto zangaphambili, nokuba sihle kangakanani na isibhakabhaka, isibhakabhaka esiluhlaza sifana nokuhlamba, nokuba amanzi acwebile kangakanani na, amaza aluhlaza asuke eshukuma.Ukuhamba asikokufota nje nokujonga ilanga. ...
"Abahambi" - iingcali
ubomi buyinto yokuziqhelisa
Ubomi bude kakhulu, hlala wenza into yobudenge ngokwaneleyo ukuba ubambe iinkumbulo ezilungileyo zobutsha bakho
Ubomi bufutshane kakhulu, ukuba awenzi into yobudenge, kutheni ushiya ubuhle obuncinci bobutsha bakho?
"Abahambi" - amaqabane
Kulishwa ukuba sidibane, sinethamsanqa, kukho ithuba elinye kwamawaka alishumi lokuhlangana nawe kwaye uhambe nawe okwethutyana. Ndiyathemba ukuba i "Walker's Diary" inokukunika lula, ikusombulule ubunzima obuthile, kwaye ikufumanele ubuhle kwithuba lamawaka alishumi.
Nangona kukho rhoqo iingozi ezincinci zolu hlobo kuhambo, musa ukulahlekelwa ukulindela izimanga ezincinci, kwaye ikona elilandelayo liya kuba ngcono ngakumbi.
Umhlaba mkhulu kakhulu, masihambe siye kubona
Uzakuba yintombi engazi nto ngokuhombisa,kodwa ungazakhela umzi omhle wedwa.emva koku nomsindo kufana nokuvula imithambo emibini kaRen noDu.Ingachazwa ngamagama ~ nothing vimba u ~ Hahaha (^ ~ ^). Wamkelekile ukuba uhlale endlwini yam kwaye uthethe ngebali lokuhombisa, uhombiso oluninzi luyi-DIY ndim. Ukongeza kokuziva ubhaptizo lobuhle bendalo, indawo yokuhlala ayiyi kudanisa ~\_^O^/
Amagumbi okulala amabini, amagumbi okuhlala amabini kunye namagumbi okuhlambela amabini, ngalinye linebhedi enkulu ye-1m 8*2m, igumbi lokuhlala tatami 1m 75 * 1m 8, izitya zasekhitshini, ifriji, umatshini wokuhlamba ungasetyenziselwa simahla kuwe, ukutya neziselo zihlawulwa simahla. ukusetyenziswa.
Ubumelwane apho indlu ikhoyo ibizwa ngokuba
"Yilin Community", kufutshane neAershan North Station, kunye nesibhedlele saseAershan City. Imizuzu elishumi elinesihlanu ukuya eRose Peak nase China-Mongolia Port.
Umbuki zindwendwe ngu- 夕姐
Ndingathanda ukukunceda kwaye ndenze konke okusemandleni am.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hinggan